février | 2022 | InfoKmada
Tb : MATSF : maro ny tanjona ho tratrarina
InfoKmada - 18 février 2022 0
Tsy maintsy hirosoana ny fanavaozana sy ny fametrahana ny drafi-panajariana ny tanàna manerana ny Nosy. Laharampahamehana tanterahin’ny eo anivon’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany izany araka ireo tetikasa efa mandeha sy tanterahina ankehitriny. Ankoatra io, maro no tanjona tratrarina amin’ity taona ity.
Fanafihana mpitondra moto : avoahy ny marina hoy ireo mponina ao Ambodivonikely
Taorian’ny famoahan’ny Polisy sy ny gazety an-tsoratra ny fahatratrarana olona telo mirahalahy voalaza fa tompon’antoka tamin’ny fanafihana moto teny Ambohimanarina, nilanja sora-baventy ny mponina ary nilaza fa vaovao tsy marina no navoaka. Angatahan’ireo mponina sy ny fianakavian’ireo voasambotra ny hanaovana fanadihadiana lalina ka hamoahana ny marina rehetra mialohan’ny hanasaziana izay meloka.
Raharaha Fer rond : mangataka ny hanokafana ny fanadihadiana ireo mpianatra zanak’i SOFIA
Mangataka ny fanokafana ny fanadihadiana ankehitriny ny fikambanan’ny mpianatra zanaky ny faritra sofia ao amin’ny Oniversite Toamasina Barikadimy manoloana ny raharaha Fer Rond. Tsy nisy ny famonoan’olon-tokana saingy nisy kosa ny fitsaram-bahoaka izay niteraka ny fahafatesan’i Fanahia raha ny namabaran’izy ireo.
Filankevitry ny governoran’ny FIDA : nandray anjara nandritra ny andiany faha-45 i Madagasikara
Vahaolana hahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fambolena ankehitriny ny fametrahana paikady ho amin’ny famokarana mifanaraka amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Io no nivohitra nandritra ny lahatenin’ny filoham-pirenena Malagasy tamin’ny andiany faha-45 ny filankevitry ny governoran’ny FIDA omaly.
Rivodoza Dumako : 6 ireo namoy ny ainy, 5 095 iroe traboina hatreto
Miisa 6 ireo namoy ny ainy, raha toa ka 1 267 ireo tokantrano traboina hatreto tamin’ireo faritra nandalovan’ny rivodoza Dumako raha ny tatitra navokan’ny BNGRC ny hariva teo. Anton’izany ny fikaran’ny rano, eo koa ny faharavan’ireo trano.
Fanavaozana tanteraka ny lisi-pifidianana : tsy maintsy hirosoana hoy ny minisitry ny Atitany
Tsy maintsy hirosoana ny fanavaozana tanteraka ny lisi-pifidianana na ny Refonte des listes électorales hoy ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Nijanona tamin’izay ihany ny fanazavana nentiny raha nanontanian’ny mpanao Gazetin’ny Kolo Tv mahakasika izay androany. Tsy mbola fantatra arak’izany hoe oviana ary ahoana ny fandaminana amin’ny fanatanterahana azy.
Fakana an-keriny : olona 06 no voasambotra ka natolotra ny Fampanoavana
Tohin’ilay raharaha fakana an-keriny ilay zazakely 3 taona teny Ambodivonikely, olona 06 miaraka amin’ilay atidoha nikotrika no voasambotra ka natolotra ny Fampanoavana. Mbola karohina kosa ireo olona 02 nitondra moto naka an-keriny ilay zaza.
6e Sommet UE-UA : natomboka androany tao Bruxelles ary hifarana rahampitso
Natomboka androany tao Bruxelles ary hifarana rahampitso ny fihaonana an-tampony faha enina ho an’ny Vondrona Eropeana sy ny Vondrona Afrikana. Isan’ny hiompanan’ny lahadinika ny fampandrosoana, ny fahasalamana ary ny fandriampahalemana sy ny fiovan’ny toetr’andro. Mandray anjara amin’io fihaonana an-tampony io i Madagasikara.
Ambodivoanio Nosy be : vola manodidina ny 27 Tapitrisa Ariary lasan’ireo jiolahy
InfoKmada - 16 février 2022 0
Trangam-piarahamonina. Halina tokony ho tamin’ny 9 ora, vola manodidina ny 27 Tapitrisa Ariary avy amin’ny mpivady mpanao Cash point ao Ambodivoanio Nosy be no lasan’ny Jiolahy. Noratran’izy ireo ilay mpivady hahafahana maka ny vola sy ny finday teny aminy.
Rivodoza DUMAKO : hitondra rotsak’orana mafy ho an’ireo faritra andalovany
Ahiana ny fiakaran’ny rano sy ny fihotsahan’ny tany amin’ireo faritra andalovan’ny rivodoza DUMAKO ankehitriny manoloana ny rotsak’orana mafy entiny raha ny nambaran’ny avy eo anivon’ny BNGRC. Miisa 11 hatramin’ny androany maraina ireo faritra nahazo fampitandremana mikasika ny fihatraikan’ity rivodoza ity ary vinavinaina ahatratra 70 000 ny isan’ireo traboina vokatr’izany raha ny fanazavana.